I-Golfer Tommy Armor: I-Biography kunye neNkcazo yeMisebenzi
Iphrofayili ye-3-time winning champion and name famous
U-Tommy Armor wayengumnqweno omkhulu weqonga eli-3 kwiminyaka ye-1920 neye-1930, owathi waba ngumnye wabaqeqeshi begalufu abahlonishwa kakhulu. Igama lakhe lisasetyenziswa njengegama legama leglabhu zegalufu.
Umhla wokuzalwa: Sept. 24, 1895
Indawo yokuzalwa: E- Edinburgh, Scotland
Umhla wokufa: Septemba 11, 1968
Isiteketiso: ISiliva iScott
• U-1927 US Open
• I-PGA Championship ye-1930
• Ngo-1931 iBritish Open
Tommy Armor: "Akukhona nje ukukwazi ukwenza izibhengezo ezinkulu ezenza iinkokeli, kodwa umgangatho obalulekileyo wokwenza amahlumela ambalwa kakhulu."
Umbhali uRoss Goodner kwiTommy Armor: "Ngesinye isikhathi, waziwa ngokuba ngumdlali onqabileyo wesinyithi, owona mkhulu kunabo bonke, umsebenzisi ophuza kakhulu kunye nomfundisi ogqithiseleyo kunabo bonke."
ISigqeba: "Egalufini unamaqela amabini abaphangaleleyo:" wena kunye nekhosi. "
• Ukholo lukholelwa ukuba luye lwaqulunqa igama elithi " yips " ukuchaza iimbandezelo zeentloni ezenza iifayile ezimfutshane zikhohlise kwiindawo ezithile zegalufu. Wathi nge-yips, "Emva kokuba uye wavuka, unayo 'em.'
• Ngowe-1927 i-Shawnee Open, i-Armor yathumela amanqaku angama-23 kwinqanaba le-17 le-17. Oku kuthathwa njengomlinganiselo ophezulu kunomnye wokuba umcimbi wePGA Tour , kwaye ukholelwa ukuba ngowona mgangatho ophezulu kunayo nayiphi na iindwendwe ezinkulu zohambo lwehlabathi.
Umzukulu wezandla zikaTommy Armor III wayengumqhubi we-PGA Tour okwixesha elide, ukususela kuma-1980 ukuya kuma-2000, kunye ne-2-win winning time.
Tommy Armor Biography:
Igama likaTommy Armor lihlala linye lezona zibonakala ngokugqithiseleyo kwiminyaka emashumi eminyaka emva kokufa kwakhe kunye neminyaka emininzi ngaphezu kokuphakama kwegama lakhe. Ngoba? Ngenxa yeeklasi zegolfu zeTommy Armor, i-brand esithengisiwe ngokuqhubekayo ukususela kwi-Armor's dayday.
Umdlalo wegulati wamatye wagxotha xa ehlala eSkotland. Emva kokuwina i-Amateur yesiFrentshi ngowe-1920, izixhobo zanquma ukuya eMelika. Ngaloo nqanawa uhamba ngaphesheya kwe-Atlantic, iArmor wahlangana noWalter Hagen , owayebuya eBritish Open . Emva kokuba uHagen kunye neNqwelana behla eNew York, uHagen wanceda iSarmor umhlaba umsebenzi kwiClubs laseWestchester-Biltmore.
Kungekudala, izixhobo zakha ukubizwa ngokuba ngumfundisi omkhulu wegalufa, kungakhankanywa njengomdlali omdala womdlalo.
Isibhamu sagxuma-saqala ukusebenza kwakhe xa ephumelele i- US Open Open , ngo- 1927 , ehlula "u-Lighthorse" uHarry Cooper kwimigxobhozo engama-18. Izixhobo zaqhubeka zine-1930 ye-PGA Championship kunye ne-1931 eBritish Open, ibe yinto yesithathu ye-golfer (emva kokuba uJim Barnes noHagen) bazuze bonke abathathu bezo zihloko.
Ezinye iintlawulo ezinkulu zazibandakanya i-Western Open Open (1929). Iqhawe liye ladlala kwiqela laseMelika e-US kunye neBrithani ibhola ngaphambi kowe-1926 eBritish Open, ukhuphiswano abathile abathile "bangabalulekanga" baqala kwiNdebe ye-Ryder (jonga umlando we-Ryder Cup ).
Njengomdlali, iArms yayithathwa njengomnye wabadlali abakhulu kakhulu bensimbi-okanye nayiphi na ixesha.
Isixhobo sokuthatha umhlala-phantsi sisuka kumncintiswano emva kwexesha le-PGA ye-Tour ka-1935 kwaye yajika ixesha elipheleleyo ekufundiseni.
Wasebenza kunye nabadlali abaninzi abakhulu, kuquka noMthethoson Little , Babe Didrikson Zaharias noJulius Boros . Kodwa wafundisa iiglasi eziqhelekileyo, ukuhlawula ezinye iirhafu eziphezulu.
Ngomnyaka we-1952, wakhupha incwadi yezemfundo yokufundisa, Indlela yokudlala iGoogle igqwesileyo ngayo yonke ixesha , elibhekwa njengenye yeencwadi zakudala zegalufa . Ngokukhawuleza emva koko, iArmor ifakwe i-movie yokufundisa igolfu njengenqabana encwadini (jonga kwi-YouTube).
U-Tommy Armor wajoyina iHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama ngo-1976.
Indlela yokukhetha iSicwangciso seNgcaciso seKholeji
4 i-casos enokuqhafaza i-trabajar con la visa i-F-1 de estudiante
Imfazwe Yehlabathi II: Ukuvinjelwa kweLeningrad